Triticale - kaloria sy otrikaina.
Sakafo salama akaiky ahy
Akaiky sy manodidina antsika ny sakafo mahasalama. Mila mahafantatra azy fotsiny isika!
Ny menio fanaraha-maso voalohany
Ataovy lisitra araka ny abidia ny fisakafoanana sy ny rafi-pisakafoanana
Lisitry ny rafi-pisakafoanana
Inona no dikan'ny hoe vegetarian? Lisin'ny lahatsoratra
Tanisao ny sakafon'ny taova araka ny filaharan'ny abidia
Lisitry ny sakafo isaky ny volana amin'ny taona manaraka ny abidia
Lisitry ny sakafo ho an'ny aretina arakaraka ny abidia
Tanisao ny sakafo ho an'ny tanjona manokana arakaraka ny abidia
Lisitry ny sakafo fanadiovana ny vatana amin'ny abidia
Sanda mahavelona sy fangaro simika.
Mampiseho ny atin'ny otrikaina (kaloria, proteinina, tavy, gliosida, vitamina ary mineraly) isaky ny 100 grama ampahany azo hanina.
Nutrient Quantity Norm ** % ny fenitra ao anatin'ny 100 g % ny fenitra amin'ny 100 kcal 100% normal
Tombana kaloria 336 kCal 1684 kCal 20% 6% 501 h
proteinina 13.05 h 76 h 17.2% 5.1% 582 h
menaka 2.09 h 56 h 3.7% 1.1% 2679 h
gliosida 72.13 h 219 h 32.9% 9.8% 304 h
rano 10.51 h 2273 h 0.5% 0.1% 21627 h
Ash 2.23 h ~
Vitamina B1, thiamine 0.416 mg 1.5 mg 27.7% 8.2% 361 h
Vitamina B2, riboflavin 0.134 mg 1.8 mg 7.4% 2.2% 1343 h
Vitamina B5, pantothenika 1.323 mg 5 mg 26.5% 7.9% 378 h
Vitamina B6, pyridoxine 0.138 mg 2 mg 6.9% 2.1% 1449 h
Vitamina B9, folat 73 μg 400 μg 18.3% 5.4% 548 h
Vitamin E, alpha tocopherol, TE 0.9 mg 15 mg 6% 1.8% 1667 h
Vitamina PP, TERAKA 1.43 mg 20 mg 7.2% 2.1% 1399 h
potasiomaK 332 mg 2500 mg 13.3% 4% 753 h
kalsioma, Ca 37 mg 1000 mg 3.7% 1.1% 2703 h
magnésium, Mg 130 mg 400 mg 32.5% 9.7% 308 h
Sodium, N / A 5 mg 1300 mg 0.4% 0.1% 26000 h
solifara, S 130.5 mg 1000 mg 13.1% 3.9% 766 h
phosphore, P 358 mg 800 mg 44.8% 13.3% 223 h
Soritry ny singa
Iron, Fe 2.57 mg 18 mg 14.3% 4.3% 700 h
manganèse, Mn 3.21 mg 2 mg 160.5% 47.8% 62 h
Copper, Miaraka amin'i 457 μg 1000 μg 45.7% 13.6% 219 h
fanitso, Zn 3.45 mg 12 mg 28.8% 8.6% 348 h
Tena ilaina asidra amino
Arginine * 0.671 h ~
valine 0.609 h ~
Histidine * 0.311 h ~
Isoleucine 0.479 h ~
leucine 0.911 h ~
lysine 0.365 h ~
methionine 0.204 h ~
threonine 0.405 h ~
tryptophan 0.157 h ~
phenylalanine 0.638 h ~
Asidra amine azo soloina
alanine 0.486 h ~
Asidra aspartika 0.785 h ~
glycine 0.559 h ~
Asidra glutamic 4.006 h ~
Proline 1.184 h ~
serine 0.593 h ~
tyrosine 0.383 h ~
cysteine 0.275 h ~
Asidra matavy 0.366 h max 18.7 г
8: 0 Caprylic 0.018 h ~
12: 0 Lauric 0.014 h ~
14: 0 Myristic 0.009 h ~
16: 0 Palmitic 0.274 h ~
18: 0 Stearin 0.031 h ~
Asidra matavy tsy miangona 0.211 h min 16.8 г 1.3% 0.4%
16: 1 Palmitoleic 0.018 h ~
18: 1 Olein (omega-9) 0.178 h ~
20: 1 Gadoleika (omega-9) 0.015 h ~
Asidra matavy polyunsaturated 0.913 h from 11.2 ho 20.6 8.2% 2.4%
18: 2 Linoleic 0.853 h ~
18: 3 Linolenika 0.061 h ~
Omega-3 tavy asidra 0.061 h from 0.9 ho 3.7 6.8% 2%
Omega-6 tavy asidra 0.853 h from 4.7 ho 16.8 18.1% 5.4%
Ny sandan'ny angovo dia 336 kcal.
kaopy = 192 g (645.1 kCal)
OreMba ny lohahevitra: Vary, voam-bary manontolo, tsy voahodina
Triticale manankarena vitamina sy mineraly toy ny: vitamina B1 - 27,7%, vitamina B5 - 26,5%, vitamina B9 - 18,3%, potasioma - 13,3%, magnesium - 32,5%, phosphore - 44,8, 14,3%, vy - 160,5%, manganese - 45,7%, varahina - 28,8%, zinc - XNUMX%
Vitamin B1 dia ampahany amin'ny anzima manan-danja indrindra amin'ny gliosida sy ny angovo metabolisma, izay manome ny vatana angovo sy akora plastika, ary koa ny fatran'ny asidra amine amam-bondrona. Ny tsy fahampian'ity otrikaina ity dia mitarika fikorontanana mafy eo amin'ny rafi-pitabatabana, ny fandevonan-kanina ary ny aretim-po.
Vitamin B5 mandray anjara amin'ny proteinina, tavy, metabolika gliosida, metabolisma kolesterola, ny synthesis ny hormonina maromaro, hemoglobin, mampiroborobo ny fifohana ny asidra amine sy ny siramamy ao amin'ny tsinay, manohana ny fiasan'ny korten adrenal. Ny tsy fahampian'ny asidra pantothenika dia mety hitarika fahasimbana amin'ny hoditra sy ny fonon'ny moka.
Vitamin B6 amin'ny maha coenzyme azy ireo dia mandray anjara amin'ny metabolisma ny asidra niokleika sy ny asidra amine izy ireo. Ny tsy fahampian'ny folate dia mitarika amin'ny tsy fitovian'ny asidra niokleika sy ny proteinina, izay miteraka fanakanana ny fitomboan'ny sela sy ny fizarazarana, indrindra amin'ny sela mihombo: ny tsoka, ny epithelium amin'ny tsinay, sns. Ny tsy fahampian'ny fanjifana folate mandritra ny fitondrana vohoka dia antony iray mahatonga ny tsy fahamatorana, tsy fahampian-tsakafo, tsy fahampian-tsakafo hatrany am-bohony ary fikorontanan'ny zaza. Fikambanana matanjaka iray no naseho teo amin'ny haavon'ny folate sy ny homocystéine ary ny loza mety hitranga amin'ny aretim-po.
potasioma no tena ion-intracellular izay mandray anjara amin'ny fifehezana ny rano, ny asidra ary ny fifandanjan'ny electrolyte, dia mandray anjara amin'ny fizotran'ny tsindrona hozatra, ny faneriterena ny tsindry.
magnésium mandray anjara amin'ny metabolisma angovo, ny fitambaran'ny proteinina, ny asidra niokleika, misy vokany maharitra amin'ny membrane, ilaina mba hitazomana ny homeostasis an'ny calcium, potassium ary sodium. Ny tsy fahampian'ny manezioma dia mitarika hypomagnesemia, fitomboan'ny risika hiparitahan'ny tosidra, aretim-po.
phosphore mandray anjara amin'ny fizotran'ny fisiolojika marobe, ao anatin'izany ny metabolisma angovo, mifehy ny fifandanjana asidra-base, dia ampahany amin'ny fosfolipidia, nukleotide ary asidra niokleary, ilaina amin'ny fitrandrahana taolana sy nify. Ny tsy fahampiana dia mitarika amin'ny tsy fahampian-dra, tsy fahampian-dra, rikety.
Iron dia ampahany amin'ny proteinina amin'ny asa isan-karazany, ao anatin'izany ny anzima. Mandray anjara amin'ny fitaterana elektronika, oxygen, miantoka ny fizotran'ny fihenan'ny redox sy ny fampidirana ny peroxydation. Ny tsy fahampian-tsakafo dia mitarika amin'ny tsy fahampian-dra hypochromic, tsy fahampian'ny myoglobin ny hozatry ny taolana, ny fitomboan'ny havizanana, ny myocardiopathy, ny gastritis atrophic.
manganèse mandray anjara amin'ny fananganana ny taolana sy ny sela mpampitohy, dia ampahany amin'ny anzima tafiditra amin'ny metabolisma ny asidra amine, gliosida, catecholamines; tena ilaina amin'ny famolavolana ny kolesterola sy ny nucleotides. Ny tsy fahampian-tsakafo dia miaraka amin'ny fihenan'ny fitomboana, ny korontana ao amin'ny rafitra fanabeazana aizana, ny fihenan'ny taolana, ny fikorontanan'ny gliosida ary ny metabolisma lipida.
Copper dia ampahany amin'ny anzima miaraka amin'ny hetsika redox ary tafiditra ao amin'ny metabolisma vy, manentana ny fandraisana ny proteinina sy ny gliosida. Mandray anjara amin'ny fizotran'ny fanomezana oxygen ny vatan'ny vatan'olombelona. Ny tsy fahampiana dia miseho amin'ny alàlan'ny fikorontanana amin'ny fiforonan'ny rafi-pitatitra sy ny taolana, ny fivoaran'ny displasia mampifandray.
fanitso dia ampahany amin'ny anzima 300 mahery, mandray anjara amin'ny fizotran'ny synthesis sy ny famoahana ny gliosida, ny proteinina, ny tavy, ny asidra niokleika ary amin'ny fifehezana ny fanehoana fototarazo maromaro. Ny tsy fahampian-tsakafo dia miteraka tsy fahampian-dra, tsy fahampian-tsakafo faharoa, aty cirrhosis, tsy fetezana eo amin'ny lahy sy ny vavy ary ny tsy fetezan'ny foetus. Ny fandalinana vao haingana dia nanambara ny fahafahan'ny dosie zinc avo be hanakorontanana ny fitrohana varahina ary amin'izany dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana anemia.
OreMba ny lohahevitra: Voanjo flakes
Tags: kaloria atiny 336 kcal, firafitry ny simika, sanda ara-tsakafo, vitamina, mineraly, fomba mahasoa an'i Triticale, kaloria, otrikaina, fananana ilaina ao amin'ny Triticale
5 / 5 ( 63 vato )
Resipeo Voam-bary miaraka amin'ny kakao. Kaloria, fangaro simika ary sanda ara-tsakafo.
Resipeo ny masomboly Semolina misy ranom-boasary. Kaloria, fangaro simika ary sanda ara-tsakafo.
Resipeo ny masomboly Semolina miaraka amin'ny karaoty. Kaloria, fangaro simika ary sanda ara-tsakafo.
Next Post: Lafarinin'ny orza
Ny tsara indrindra amin'ny 2017 araka ny Eater
Haingon-kazo fihinana (horonan-tsary)
Kaloria Torkia, hoditra ihany. Fangaro simika sy sanda mahavelona.
Lafarinina varimbazaha amin'ny ambaratonga avo indrindra, manerantany, nohamafisina miaraka amin'ny calcium
Ny fampihetseham-batana kely ambany 10 fohy ho an'ny tongotra avy amin'ny Blogilates
Votoatin'ny kaloria Ovy nandrahoina tamin'ny peel (ao anaty palitao), esory miaraka amin'ny sira. Fangaro simika sy sanda mahavelona.
Fironana vaovao - mofomamy taratasy fidiovana
Articles, ChemicalComposition Ny tsara indrindra amin'ny 2017 araka ny Eater
ChemicalComposition Vary dia (maina, vary karana, tsitsianiya), maina
ChemicalComposition Kaloria atiny Karaoty, mangatsiaka. Fangaro simika sy sanda mahavelona.
ChemicalComposition Voasarimakirana - atiny misy kaloria sy fangaro simika
ChemicalComposition Cod Liver (am-bifotsy) - ny atin'ny kaloria sy ny famoronana simika
Fampiasana namoronana Gazety News Byte. Ampandehanin'i WordPress.